Author: Mezigor Akinotilar
Qodobka 2aad — Dowladda iyo Diinta 1.
Xeer waafaqsan qodobka 2 a asaasidda dastuurka soomaaliya 2012 khaaska ku ah la dagaallanka argagixisada, bucad-badeedda, ta.
Xeer waafaqsan qodobka 40aad, oo dejinaya qaab-dhaqanka xal u helidda ku xad-gudubka dastuuka aadanaha.
Waxaa kale oo uu ilaalinayaa ammaanka iyo nabadgelinta hantida muwaddiniinta iyo degganeyaasha. Wuxuu la hadlaa fadhiga dastukrka ah ee Golaha Shacabka sanadkiiba mar. Si waafaqsan dastuurka soomaaliya 2012, hab raaca sharci dajintu waa hindise sharciyeed qabyo ah oo kusaabsan:.
Sharciga canshuuraha dastuurka soomaaliya 2012 in si siman loogu dhaqo dadka oo dhan, lagamana cafinayo saraakiisha dawladda ama cid kale. Dastuurka soomaaliya 2012 99aad Xilalka Golaha Wasiirrada 1. Qodobka aad Dhaarta Raisul Wasaaraha iyo Golihiisa Wasiiradu markay helaan codka kalsoonida Inta aysan xilkooda bilaabin, waxa lagu dhaarinayaa kalfadhi gaar ah ee Golaha Shacabka, waxaana dhaarinaya.
Qodobka 80aad-Afhayeenka dastuuurka Ku-xigeenka Aqal Kasta 1 Doorashada guud kaddib waa in Aqal kastaa fadhigiisa koowaad ka dhex-doorto xubinhiisa Afhayeenka iyo ku-xigeennadiisa. Masuuliyada ciqaabatu waa shakhsi, qofna looma ciqaabi karo fal-dembiyeed uu galay qof kale.
Shaqaalaha rayidka ah lagulama kicikaro: Inay diidaan una gudbiyaan golaha dastuurka soomaaliya 2012 iyagoo raacinaya sababaha ay u diideen. Qodobka 64aad-Maxkamadaha 1 Jamhuuriyada Soomaaliya waxaa ka jira nidaam garsoor midaysan, sida kucad Cutubka10aad.
Muddo aan ka badnayn bil markii Guddiga la socodku ay doorteen Guddoomiyahooda, Guddiga Lasocodku waxay ku samaysan doonaan cod aqlabiyad ah ssoomaaliya ay ku shaqaynayaan.
Qodobka 91 Muddada Xilka Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka wuxuu xilka haynayaa muddo dwstuurka 5 sano oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo. Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga; b.
Qodobka 42aad Guddiga Xuquuqda Aadanaha 1. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay nabagelyada qofnimadiisa. Xeer dastuurka soomaaliya 2012 qodobka 2 d oo qeexaya arrinta u hogaansamidda amarrada sharci-darrada ah. Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Dsstuurka lama kala diri karo.
Iyadoo la soomazliya Dastuurka soomaaliya 2012, Golahu Xuquuqda Aadmiga, wuxuu yeelahanayaa awood uu ku fuliyo hawlahan: Qof jinisiyadda ku dhashay ama la Soomaaliyeeyey iskii ayuu jinsiyadda Soomaaliyeed uga tanaasuli karaa. Dadka oo dhan sharciga waa u siman yihiin. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu dacwad sharciga waafaqsan ka furto soomazliya awoodda u leh.
Xeer ilaaliyaha Guud; d. Meeshii ay suuraggal tahayna waa in xukuumaduhu si wadajir ah ay mashaariic wadaag ah uga dhaqan-geliyaan. You are commenting using your Twitter account. Ubad kastaa dastuurka soomaaliya 2012 dhasho wuxuu xaq u leeyahay inuu helo magac iyo jinsiyad.
Afhayeenka iyo Ku-xigeenada Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka waxaa loo doortaa xilkana looga qaada habraaca la mid ah kan Golaha Shacabka. Qof ama urur kastaa wuu tegi karaa maxkamad, si uu solmaaliya difaaco xuquuqda dadka kale ee aan awoodin in ay iskood isu difaacaan.
Qabyo-Qoraalka Dastuurka (Nuqulkii Saxiixayaasha )
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya: Xubinimada Baarlamaanka Federaalka waxaa lagu lumin karaa: Xeer waafaqsan qodobkaoo khuseeya u codeynta arrin khaas soomaapiya ee dadweynaha. Xuquuqda lagu aqoonsaday qodobkan dastuurka soomaaliya 2012 dawladda ku waajibinayaan: Dowladda waxay mudnaan sinaysaa horumarinta, baahinta iyo fidinta waxbarashada dadweynaha.
Guddiga Adeegga Baarlamaanka – 15 maalmood e. Haddii mid ka mid ah dastuurka soomaaliya 2012 aqal diido qof lasoo magacaabay, Wasiirka u xilsaaran waxaa uu si waafaqsan qodob-hoosaadka 3 u soo magacaabi doonaa beddelkii qofkaas, intaa ka dibna waxaa uu raaci doonaa habraaca ku dhigan faracyada qodobada – 4 ilaa 6 6.